Cabdi Raxmaan Maxamed oo ka badbaaday in loo Tarxiilo Somaliya, Sidee ayay ugu suura gashay
HomeWararka CaalamkaCabdi Raxmaan Maxamed oo ka badbaaday in loo Tarxiilo Somaliya, Sidee ayay ugu suura gashay
September 9, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Cabdiraxmaan Maxamed Asakiisuna yahay Somali ayaa Xalay ka Badbaaday Qorshe loogu Celin lahaa Dalka Somaliya kadib markii ay qabteen Booliska Germalka.
Ninkan oo lagu qabtay Magaalada Munchen ee Dalka Germalka ayaa loo soo gudbiyay Dhanka Garoonka diyaaradaha Frankfurt ka hor waxaa jirtay Qeylo dhaan loo diray Dadka Somalida inkastoo aysan Caawin arintan.
Ugu Danbeyn Cabdiraxmaan ayaa loo gudbiyay Garoonka diyaaradaha Frankfurt halkaasi oo Askar kale diyaar ugu aheyd waxana leesku dayay in Xoog lagu saaro diyaarada.
Cabdiraxmaan Maxamed ayaa si awood ah u diiday in uu raaco diyaarada waxana ugu danbeyn Booliska ay qaateen go’an ah in leeska fasaxo.
Ninkan oo sanadkii 2014 iska dhiibay Dalka Germalka ayaa shaqeysan jiray mudadaas waxana ugu danbeyn uu dib u helay huriyadiisa.